Malgachoscopie – Ny fodiako – i am a malagasy in genève
17 novembre 2006 28 novembre 2008
Malgachoscopie – Ny fodiako
Tapa- kevitra ihany ny hody nony ela ny ela. Teny Ivato …
Nolazaina fa tsy manankery intsony ny Pasipaoroko.
Nolazaina fa tsy nisoratra anarana tamin’ny masoivoho aho.
Nolazaina fa na ny filamatry ny tanindrazana aza efa niova.
Nolazaina fa tsy misy mahafantatra ahy.
Nolazaina fa tsy any amin’ny lisitry ny mpifidy ny anarako.
Nolazaina fa tsy nahavita fanompoam-pirenena aho.
Nolazaina fa tsy manana visa amin’ny maha-vahiny aho.
Nolazaina fa nikasa hiditra an-tsokosoko aho.
Nolazaina fa hitsikilo angamba no anton-diako.
Nolazaina fa satria mizaka zom-pirenena hafa aho.
Dia tsy mendriky ny ho Malagasy akory.
Tsaroako tsara anefa Ikaky sy Neny nahitako masoandro,
Tsy misy miraharaha izany hoy ny lalàna.
Ny toerana mbola ilevenan’ny tavoniko,
Tsy manan-danja izany hoy ny lalàna.
Ny làlana mody mankeny aminay,
Tsy ahoako izany hoy ny lalàna.
Ny fasan-drazanay eo andrefan-tanàna,
Hoy ny lalàna, tsy misy toeranao aty, fa mandehana mody
Ankehitriny, tsy ahoako izay Pasipaoroko notazoniny,
Satria akimpiko ny masoko dia fantatro ao anatiko ao,
Fa tsy voafetran-dalàna na taratasy ny fitiavako anao,
Mbola Malagasy ihany ve ? >>
Lahantsoratra Malgachoscopie hafa :
[angady nananana izao hetsika iombonana izao] Tattum – Extrait>>
Aiky – Malgachoscopie >>
Dadee – Malagasy Copy >>
Elodieriana – Malgachoscopie >>
Harinjaka – malagasy kôpy ! >>
Heriniaina – Malgachoscopie >>
Iko – Lettre à un malagasy de Madagascar >>
Jentilisa – Malagasy Kopia >>
JoGanY – Malgachoscopie >>
Lilia – Malgachoscopie >>
Lova – Exil >>
Lova – Madagascarianskopia >>
Lutine’s Wink – Malgachoscopie >>
Malagasy any California – Malagasiscopia >>
Many – Malgachoscopie >>
Marc – Malgachoscopie >>
Mia – Malgachoscopie >>
Nivo – Malgachoscopie >>
Rajiosy – Malagasyscopie >>
Tokinao – Malgachoscopie >>
tomavana – Fantatro izay fihaviako >>
Vola – Malgachoscopie >>
Xavier – Malgachoscopie >>
… lahantsoratra nosoratan’ireo Malagasy (ara-pirazanana sy ara-po) 22 miely eran-tany, afahantsika mifankalala bebe kokoa.
Posté dans sary, tsetsatsetsaTagué drapeaux, foto, identite, identites, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, malgachoscopie, photo, photographie, photographies, photography, photospar tomavana19 commentaires
19 réflexions sur “Malgachoscopie – Ny fodiako”
17 novembre 2006 à 14:45
vakio eto >>
Sady tsy an-tany no tsy am-parafara, sady tsy ro no tsy ventiny 🙂 ???
Nianatra lalàna ny tenako ary ireo atony rehetra notanisainao ireo no nanaovako izany. Miaina sy niaina tao amin’ny tontolon’ny maso ivoho koa aho hatramin’ny fahakeliko ary azoko tsara ny tianao hiaviana.
Raha dinihina akaiky ny tantaran’ny madagasikara dia mpivahiny avokoa isika ny tonga tao … raha ny fiainana eto antany indray no zohiana dia fandalovana ihany ny antsika no eto …ka tsy misy tompony eto tsy akory.
Amiko diatokony tsy ho ankasarotina velively ny fivoahana sy fidirana any amin’ny firenena anakiray idrindra fa any amin’ny tanin’ny ray amandrenin’ny tena. Raha raisina fotsiny amin’ny zo maha-olombelona. Indrisy anefa fa tsy mitovy avoko ny olona rehetra ary misy ny mpanararao-paty. Iaraha mahalala koa ny zava-misy eran-tany amin’izay andro iainan-tsika izao: ny fampitahorana maro samihafa izay re etsy sy ero. Ohatra akaiky amin’izany ny faha 11 septambra ray sy roa arivo.
Malagasy ianao fa Aza Manahy
« Personne n’est etranger sur terre »
hono hoy aho , ianao ve ilay mpitandrina malagasy amin’ny sary ? raha izany mantsy dia mpiara-mianatra isika taloha ary nahafaly ahy indrindra ny mandre vaovao mombanao amin’ny alalan’ity blaogy ity
17 novembre 2006 à 21:17
@ Tattum Any amin’ny Malagasy miray aho mamaly anao >>
@ Harinjaka Anampiko ny nolazainao, hoy ny fahendren’ireo mponina voalohany tany USA, « tsy manan-tompo ny tany, mpindrana ihany isika, ary hampita izany amin’ireo taranantsika any aoriana. » Tsy dia simba loatra raha azo atao 🙂
@ Dety Na dia sarotra amiko ny hamaly anao tsy nahita ilay sary, dia faly aho mandre fa niara-nianatra isika, misaotra betsaka amin’ny fitsidihanao 😀
18 novembre 2006 à 01:26
ao tsara 🙂 tonga dia mety 🙂
18 novembre 2006 à 02:14
Mbola gasy tokoa ianao !
Tsy ny pasipaoro velively no maha-gasy antsika,
Tsy ny masoivoho koa no mandidy hoe ireto avy ny gasy,
Ny mpitondra mandalo, ny Firenena koa toy izany…
Fonao ihany no mametra ny maha-gasy anao,
Ka raha mbola mitempo gasy ny fonao dia gasy lalandava ianao
18 novembre 2006 à 11:36
@ Harinjaka ‘Mondialisation’ talohan’ny rehetra sa ahoana ?
@ Marc Angamba ny tianao ambara tsy hoe : isaky ny miova indray ny fitondrana dia andramo foana fa tsy ho mety ve ny iafarany ? 😉
Misaotra betsaka amin’ny teny feno fahendrena.
18 novembre 2006 à 15:22
Manararotra @ ity asabotsy maraina ity aho mba mametraka comment kely ato @blog ‘nao ato. Efa nandalo teto mantetika ny tenako fa tsy dê mora amiko noho manoratra @ teny gasy ka mila « exercicex » kely aloha.
Aleo aloha handramana @ ity dê rehefa tsy misy dikany intsony lê soratra dê havadika @ teny frantsay sa ahona?
Faly mihitsiny aho mamaky @ ny soratrao eran’ny blogasphère satria @ finaritra sy @ fahendrena ny teninao. Sady vao haranao daholo zay resaka @ blaogy isan karazany (maro mihitsiny itsika zao). Mba maha malagasy an-tsika nê tsy @ taratasy ihany fa am-po koa.
Je vais continuer en français sinon ça va être incompréhensible avec cet écrit rouillé!
J’ai eu mes plus grandes difficultés avec la Diaspora quand j’ai confronté leur fermeture face aux étrangers. C’est encore gênant pour moi de le dire aujourd’hui mais le jour où ma Communauté a refusé d’intégrer en son sein des amis nés et ayant grandi à Madagascar mais qui n’avaient pas la couleur de peau règlementaire, j’ai eu une des plus grande honte de ma très courte vie.
Pas grand chose n’a été exigé de leur part ce jour-là sinon le minimum de politesse et d’éviter de demander à ces jeunes « Teratany » s’ils avaient réellement un papier leur prouvant leur vécu au pays…..
Il faut croire que beaucoup de choses vont dans les deux sens non?
18 novembre 2006 à 20:08
ilay sary resahako dia ilay sary fanambarana ny fanosorana ( na fanokanana , tsy tsaroako loatra ) mpitandrina tao Lausanne 3 Novembre . Dans une note du 1er Novembre , dans la catégorie fivavahana , j’ai cru reconnaître une condisciple du lycée : Lisiarinivo, est-ce que c’est la même personne que Tomavana . Tu pourrais me répondre à mon adresse e-mail ?
19 novembre 2006 à 00:27
@ Jogany Izaho no voalohany faly mandray anao 😀
Mahamenatra tokoa izany zava-niseho izany anefa tsy mahagaga ahy loatra, satria zary fomba ratsy tsy mitsahatra anivontsika samy Malagasy ny fanavakavahana ‘plateau vs côtier’ ets …
Ilay teniko tamin’i Aiky [>>] no averiko aminao « tsy vahoaka voro-manga niteraka diaspora voron-dolo akory ny Malagasy. » Ny tiako ambara dia izay toetra hita any an-toerana dia hita aty ivelany koa.
Ambarako anao fa rehefa manavakavaka amiko dia mitovy, na gasy izy na vazaha, n’inoninona sokajy anavahana, na fihaviana, na politika, indrindra fa fivahanana. Halako e !
@ Dety Ny azoko ambara dia ny hafatrao tafita, fa ny tohiny angamba tsy hamboratsika eto 😉
Na dia izany aza, manantena mbola hamaky anao etoana.
19 novembre 2006 à 01:08
tomavana a! Mampahatsiahy ahy an’ilay ao amin’ny baiboly izy ity e : « …Fa ny fitiavana no lehibe indrindra ».
19 novembre 2006 à 09:22
Tena marina mihintsy e 🙂 mifameno amin’ny an’i Harinjaka tetsy ambony.
Ho fanampiny vao tsy ela i Lillia [>>] no namelabelatra momba ny fitiavana.
elodiariana dit :
20 novembre 2006 à 22:35
Mampientanentana mihintsy anie izany poezian’i Tomavana izany é! Marina tokoa izany fa akipy ny maso dia mazava fa mbola malagasy ny tena ary ho malagasy mandrakizay! Mifanandrify amin’ilay noteneniko ihany, henoy ny fo, na jereo (ny lokony) ny fo dia tsapa fa dia malagasy foana.
tontolontsika dit :
20 novembre 2006 à 23:10
Misy teny iray izay, hahatsiarovako ilay mampianatra teny malagasy anay fahiny fony izahay taona faha-enina (6ème): andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko. Raha hitarina kely (extrapolation)dia toy izao ny fijeriko azy: tiako sy hajaiko ny tany hipetrahako (terre d’accueil)fa tsy midika velively izany fa nanadino ny maha-malagasy ahy aho. Na dia naka volon-tany aza aho (intégration oblige), tsy nanadino ny maha-gasy ahy kosa.
20 novembre 2006 à 23:06
Izaho no voalohany faly mandray anao etoana.
Misaotra amin’ny teny mamy ary dia aleo averiko indray fa hindramiko mihintsy iny fiteny hoe ‘lokon’ny fo’ iny fa tiako loatra.
21 novembre 2006 à 15:16
Voalohany aloha, faly aho mandray anao 😀 tongasoa !
F’angaha tsy loza fa lasa fiteny fotsiny fa saika hadino tanteraka ny tsipelina satria tsy misy ‘occasion’ hanoratana teny Malagasy intsony. Soloin’ny finday [tél], mailaka [email] sy ny SMS… Ny teny Malagasy rahateo lava am-panonònana. Misaotra amin’ilay hainteny e !
Ping: Malag@sy Miray · Malgachoscopie - Fantatro izay fihaviako
Ping: Topazo-maso kely ange i Madagasikara « malagasy
14 avril 2007 à 23:03
« Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko. » Di… 1993 [Ma langue, je la fais souveraine ; quant à celles d’autrui, je les maîtrise et les fais miennes aussi, Di… 1997].
I Di no anarana entin’ingahy Rahaingoson Henri manoratra ary arak’i andamioly.org >> dia izy no nipoiran’io filamatra io. I Di koa no filoha amperin’asan’ny HAVATSA izay Fikambanan’ny Poeta sy Mpanoratra Malagasy [UPEM, Union des Poètes et Ecrivains Malgaches].
← 06|11|18 – Alim-pandihizana anohanana asa fitsaboana sy fanabeazana [Archamps, FR]
06|11|23 – Vako-drazana Malagasy [Bâle, CH] →